Alshabaab oo mar kale weeraray Sheekh Mukhtaar Roobow iyo ayaga oo ku hungoobay
arlaadi August 12, 2017 No Comments
Ayada oo ay dhowaan un ahayd markii ay dagaalyahanada Xarakada Alshabaab weerar ku qaadeen fariisimo uu gobolka Bakool ku leeyahay wadaadka horay uga baxay Alshabaab ee Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, ayaa ay dagaalyahano ay hogaaminayaan saraakiil sare oo Alshabaab ah mar kale weerareen fariisimaha Abuu Mansuur.
Dagaalka oo markiisii hore ka dhacay deegaan u dhow tuullada Abal ee gobolka Bakool ayaa lasoo sheegayaa inay ciidamada Sheekh Mukhtaar Roobow difaacyo adag ka xirteen dhamaan deegaanada u dhow ayaga oo iska caabiyay weerarkii labaad ee shalay lagusoo qaaday.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo mar ka mid ahaa saraakiisha ugu sareysa Xarakada Alshabaab ayaa mudo sanado ahba gooni uga taagnaa Alshabaab kadib markii ay isku dhaceen hogaankii sare ee Alshabaab Axmed Godane oo weerar diyaaradeed lagu dilay.
Alshabaab waxa ay horay u dishay saraakiil sare oo ka tirsanaa isla ayaga oo ay ka mid ahaayeen Cumar Xamaami Abuu Mansuur Al-Ameriki, Ibraahim Afqaani iyo kuwa kale oo fara badan oo ay fikir ahaan isku qabteen qaabka loo wadayo dagaalada Alshabaab hogaamiyihii geeriyooday ee Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr oo uu magaciisa dhabta ahna ahaa Axmed Cabdi Godane.
Weerarka ay Alshabaab ku hayso Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa u muuqda mid ay ku doonayaan inay ku dilaan ama kusoo qabtaan kadib markii ay dhowaan dowlada Mareykanka madixiisa ka dul qaaday lacag shan milyan oo dollar oo horay u saarnayd maadaama uu mudo sanado ah ahaa nin meel iska degan wax howlgalo ahna aanan fulin.
Alshabaab ayaa u muuqato inay ku hungowday weerarada ay ku hayso Abuu Mansuur balse waxaan weli la kala cadeyn karin meesha uu xaalku ku dambeyn doono maadaama ay labada dhinac weli is hor fadhiyaan.